Style Archives - MYANMORE+
Style Nay Thiha - June 26, 2020 0
Style Soe Thiha Htun - May 24, 2020 0
Style Nay Thiha - February 6, 2019 0
By Nay Thiha Valentine’s Day နီးလာပြီဆိုတာနဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းဟာကိုယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့သက်သေပြကြစမြဲပါ။ တယောက်နဲ့တယောက်အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးရင်း ကိုယ့်အချစ်ကိုဖော်ပြကြတယ်။ လက်ဆောင်လေးတွေကလည်း ပန်းစည်းတွေ၊ ချောကလက်တွေကနေ လက်ဝတ်ရတနာတွေအထိစုံလင်လှပါတယ်။ နှင်းဆီပန်းတွေဟာအရောင်နဲ့အပွင့်အအရေအတွက်ကိုလိုက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးစောင်ပြီး လက်ဝတ်ရတနာတွေကတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ လက်ပတ်နာရီကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကိုအချိန်တိုင်းနာရီကြည့်လိုက်တိုင်းသတိရနေစေခြင်း၊ စက္ကန့်နဲ့အမျှအချစ်တွေတိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဆောင်ပါတယ်။ နာရီဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဖိုးတန်နာရီတွေကိုသာရောင်းချပေးနေလို့နာမည်ကြီးတဲ့ Franck Muller ကိုအရင်စဉ်းစားမိကြမှာပါ။ Sedona Hotel မြေညီထပ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ brand shop လေးဟာသေသပ်လှပပြီး လေထုထဲမှာသီချင်းအေးအေးလေးတွေလွင့်ပျံနေတယ်။ ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဖော်ရွေပျူငှာတဲ့...
Style Nay Thiha - December 6, 2018 0
By Issy D'Arcy Clark and Min Ye Kyaw Photographs by Kan Su Ho Shartra ဟာ TV talent shows ၂ခုမှာ winner ရထားပြီး​တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့​အောင်​မြင်​လာတဲ့ designer တစ်​​ယောက်​ပါ။ Myanmar's International Fashion Week ရဲ့...
Style Nay Thiha - December 2, 2018 0
ရန်ကုန်မှာ ဈေးဝယ်တဲ့သူတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းဖြစ်တံဆိပ်တွေပဲပြထားတဲ့နေရာ များများစားစားမရှိတာကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်အဝတ်အစားတွေဝယ်ရခက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကခိုင်မာတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကတော့ မြို့ထဲကဈေးကြီးတဲ့စီးပွားဖြစ်နေရာတွေကို ငှားနိုင်ပေမယ့် အသစ်ထိုးဖောက်လာတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက်ကတော့ ရွေးချယ်စရာနည်းနည်းပဲကျန်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ မြန်မာ့ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းအသစ်တွေဟာ online ပေါ်မှာပဲ ရှိပြီး နိုင်ငံရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေဟာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရပါဘူး။ မကြာမီက The International School Yangon (ISY)...
Luxury watch boutique in Myanmar: FRANCK MULLER and BACKES & STRAUSS
Style myanmoreplus - August 14, 2018 0
FRANCK MULER MASTER OF COMPLICATIONS https://youtu.be/eFLVXuvdf5Q FRANCK MULLER သည်လက်ပတ်နာရီလုပ်ငန်းေ လာကတ ကင်ပါရမီရှင်အဖြစ်အမားကေ တစ်ခဲနက် ခီးကေးခေံရ သာ Swiss လူမးေ လက်ပတ်နာရီပြ လုပ်သူတစ်ာက်ဖြစ်ပါသည်သည်။ အမှတ်တံဆ ပ် တည် ထာင်ပြီးေ နှစ်၂၀ အတ ကင်းေ လာက်တ ကင်FRANCK...
Style myanmoreplus - July 24, 2018 0
ဂျူလိုင် ၁၂.၂၀၁၈ ခုနှစ်ထုတ် DRIVE magazine မှ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြသည်။ အကာသထဲရောက်၊ ပထမဆုံး “အိုမီဂါ” (first Omega in space)လို့နာမည်ကျော်ကြားစေတဲ့အကြောင်း ကတော့ အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှုးက အိုမီဂါ နာရီကို ဝတ်ဆင်ပြီး အာကာသထဲမှာ ပထမဆုံး လမ်းလျှေက် ပြခဲ့တဲ့ Gemini-4 mission ခရီးစဉ်ကြောင့် ပါဘဲ။ ကမ္ဘာ့...